सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले ओलम्पिकको निर्वाचन अलपत्र ! – Nepali Digital Newspaper
छोराबाटै पछ्याइन थालिन् निराकार !
संसारमा समाजवाद किन आवश्यक छ ?
रुपन्देहीमा कार दुर्घटना, तीन जनाको मृत्यु
मृत्युको आभासमा सङ्क्रमित समय
जसको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा नेपालको इतिहासमै पहिलो सैनिक विद्रोह भयो
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले ओलम्पिकको निर्वाचन अलपत्र !
घटना र विचार, न्युज डेस्क ! 11 months ago September 4, 2019
नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले मंगलबार (भदौ १७) उक्त आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै आगामी शुक्रबार (भदौ २०) हुने नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन अन्योलको भुमरीमा परेको छ ।
आसन्न नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न नेपाल टेबुल टेनिस संघका पूर्वमहासचिव कलमबहादुर चित्रकारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । चित्रकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।
यो रिटमा पक्षको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, हिरा रेग्मी, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी र गणेशदत्त देवकोटाले बहस गरेका थिए । बहसपछि सर्वोच्चले विपक्षीको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जाहेर गर्दै तोकिएको मितिमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनसम्बन्धी कार्य अगाडि नबढाउनु र यथास्थितिमा राख्नु आदेश दिएको हो ।
२०७४ को नियम ४९(ख) बमोजिम सर्वोच्चले गरेको आदेशमा विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । त्यस्तै निवेदनको गाम्भीर्यतालाई दृष्टिगत गर्दै दुवै पक्षलाईं राखेर छलफल गरी उचित निकासमा पुग्नु मनासिव देखिएकोले आउँदो भदौ २२ गते पेशी पनि तोकेको छ ।
प्राप्त जानकारीका अनुसार सर्वोच्चको आदेशको पत्र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले भदौ १८ गते बुधवार प्राप्त गरेको थाहा भएको छ । अब कानुन बनाउने ठाउँमा पुगेका प्रतिनिधिसभाका सांसद श्रेष्ठले सर्वोच्चको आदेशको पालना कसरी गर्छन्, योचाहिँ रोचक प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
सामूहिक बलात्कार गरी फरार अभियुक्तहरू पक्राउ
जिम्मेवारी बोध र शासकीय क्षमता सरकारसँग नदेखिएको काङ्ग्रेसको आरोप